Ilaahay wuxuu siiyaa nolol dhab ah, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Eebbe wuxuu na siiyaa nolol dhab ah
Filimka Sida Ugu Wanaagsan ee uu helo Jack Nicholson wuxuu ciyaaraa qof aad u xun. Isagu waa shucuur ahaan iyo bulsho ahaanba buuqsan. Ma leh asxaab, rajo yarna kuma qabaan isaga ilaa uu la kulmo gabadh yar oo u adeegaysa barta maxalliga ah. Si ka duwan sidii kuwii ka horreeyayba, waxay soo martay wakhtiyo adag. Marka waxay iyaduna tuseysaa xoogaa feejignaan ah, wuxuu si isku mid ah uga jawaabayaa, oo waxay kusii dhowaanayaan una sii dhawaanayaan inta filimku socdo. Sida u sugnaanshaha yar ee da'da yar ee Jack Nicholson u muujisay xoogaa naxariis ah oo uusan u qalmin, sidaas oo kale dariiqa Masiixigeenna waxaan kula kulannaa naxariis Eebbe. Miguel de Cervantes, qoraa weyn oo reer Isbaanish ah Don Quixote, wuxuu qoray "astaamaha Ilaahay naxariistiisa inay ka sii dhalaal badnaanayso cadaaladdiisa".
Nimco waa hadiyad aan u qalmin. Waxaan u muuqanaa inaan laabano saaxiib saaxiib xun ku dhex jira noloshiisa. Waxaa laga yabaa inaan xitaa dhegahiisa u nuuxnuuxno: "Wax walbaa way hagaagi doonaan." Fiqi ahaan marka la eego, waxaan ku saxnaa hadalkan oo kale .. Si kastaba ha noqotee xaaladdu way adag tahay, Masiixiyiintu waxay oran karaan in waxku hagaagayaan oo naxariista Eebbe ay si dhalaalaya u ifaysa. doonaa.
Isagu inoolama uu macaamiloodo dembiyadayada, kumana abaal mariyo xumaanteenna aawadeed. Maxaa yeelay, samadu ha ka sii sarraysnaato dhulka dushiisa, Oo wuxuu nimco ka muujiyaa kuwa isaga ka cabsada. Ilaa iyo subaxdii ilaa fiidnimadii, waxay noo oggolaanaysaa inaannu noqonno xadgudubkeenna. Sida aabbe carruurtiisa ugu naxo, Ayaa Rabbigu ugu naxaa kuwa isaga ka cabsada. Maxaa yeelay isagu waa ogyahay waxa aan nahay; wuxuu xasuustaa inaan boodh nahay (Sabuurradii 103,10: 14).
Intii lagu jiray abaarta ba'an ee dalka, Ilaah wuxuu ku amray nebi Eliiyaah inuu aado wabiga Krit si uu u cabbo, markaasaa Ilaah wuxuu u diray tukeyaasha inay cunto siiyaan (2 Boqorradii 17,1: 4). Ilaahna wuu xannaaneeyey addoonkiisii.
Ilaah baa naga ilaalin doona dhammaystirka maalkiisa. Sidaas darteed Bawlos wuxuu warqad u qoray Kaniisadda Filibiin: “Ilaahaygu wuu hagaajin doonaa waxa aad u baahan tahay oo dhan ka dib markii taajirnimadiisa faan lagu faano Ciise Masiix” (Filiboy 4,19). Taasi waxay ku dabaashey Filiboy sidoo kale annagana way nagu quseysaa. Ciise wuxuu dhagaystayaashiisa ku dhiirrigeliyay khudbadda Buurta:
Ha ka welwelin noloshaada, waxaad cuni doontid iyo waxaad cabbi doontid; ma aha jirkaaga, waxa aad xiran doonto. Naftu miyaanay ka roonayn cuntada, jidhkuna miyaanu ka badanayn dharka? Fiir Shimbiraha cirka ka hooseeya, waxba ma beeraan, waxna ma gurtaan, maqsinnona waxba kuma urursadaan, oo Aabbihiinna jannada ku jira ayaa cunto siiya. Miyaadan ka sii qaalisanayn iyaga? (Matayos 6,25: 26).
Ilaah sidoo kale wuxuu cadeeyay inuu xanaaneeyo Eliishaa markuu u baahnaa caawimaad. Boqor Benhadad dhawr jeer buu ciidan Suuriya ka daad gureeyay reer binu Israa'iil. Laakiin markasta oo uu weerarayo ciidamada reer binu Israa'iil si uun bay isu diyaarin jireen horumarkiisa. Wuxuu mooday inuu xero ku dhex jiro xerada, sidaa darteed wuxuu soo ururiyey jeneraalkiisii ​​wuxuuna baadhay: “Yaanu nahay basaasiyada dhexdeena ah?” Mid baa ku jawaabay: Sayidow, waa nebi Eliishaa; isagu aqoon buu u leeyahay boqorka hortiisa. wuu garanayaa waxa uu ku kacay. Sidaas daraaddeed Boqor Benhadad wuxuu ku amray ciidamadiisii ​​inay u sii gudbaan Dotan oo ah magaaladii ay ku taal Elisa. Ma qiyaasi karnaa waxa ay taasi u ekaan laheyd? "Ku salaama, Boqorka Benhadad! Xaggee baad u socotaa? "Boqorkiina wuxuu ugu jawaabayaa:" Waxaan soo qabanaynaa nebiyadan yar ee Eliishaa. " Markuu yimid Dotan, ciidankiisii ​​weynaa waxay hareereeyeen magaaladii nabiga. Oo midiidinnadii yaraa ayaa Eliishaa u baxay inuu biyo soo dhaansado, oo markuu arkay ciidankii waaweynaa, ayuu argagaxay, oo intuu u orday ayuu Eliishaa ku yidhi, Sayidow, ciidammada Suuriya waa ina hor jooga. Maxaan samaynaa? Markaasaa Eliishaa yidhi, Ha cabsan, waayo, kuwa inala jiraa way ka sii badan yihiin kuwa iyaga la jira. Ninkii dhalinyarada ahaa waa inuu fikiri jiray: "waa weyn, waxaa ina hareereeyay ciidan aad u fara badan oo halkan jooga nin waalan oo ila jooga." Markaasaa Eliishaa tukaday oo yidhi, Sayidow, wiilka dhallinyarada ah indhaha u fur si aan wax u arkaa. Markaasaa Ilaah indhihiisii ​​furay oo wuxuu arkay ciidankii Suuriya oo ay hareereeyeen ciidanka Rabbiga, iyo guuto tiro badan iyo gaadhifardoodyo aad u badan. (2 Boqorradii 6,8: 17).
Farriinta Qorniinka runtiina waa tan: Waqti ka waqti ayaan dareennaa in safarkayagii nolosha aan ku lunnay geesinimo oo duruufaha nagu riixeen godkii quusashada. Aan oggolaanno in aynaan awoodin in aan nafteenna is caawinno. Markaas waxaan ku kalsoonaan kartaa Ciise iyo fariintiisa si ay noo daryeelaan. Wuxuu na siin doonaa farxad iyo guul. Wuxuu ina siiyaa nolosha weligeed ah sida walaal la jecel yahay, walaashiis gacaliye. Yaanan waligaa ilaawin taas. Aynu aaminno isaga!